China udini ibhokisi okuzenzakalelayo umugqa udini ifektri kanye nabaphakeli | Sofiq
Molding ibhokisi othomathikhi udini umugqa
I-Sandbox ku-Casting Machine Systerm
Okufakiwe Yokuxhumana: Nude nokupakisha noma ibhokisi Ngokhuni
Imininingwane Yokuletha: kungakapheli izinsuku ezingama-30 ekutholeni idiphozi
1. Yiba nokuqina okuphezulu.
2.Ingabekezelela ukucindezela okukhulu.
3.Ingahamba kahle ekubumbeni umugqa.
4. Design futhi akhiqize usayizi ezahlukene emabhodleleni imfuneko sakho.
Flask kuyinto ebalulekile imishini ubuchwepheshe ulayini othomathikhi noma semi-othomathikhi. Imishini ngomshini we-CNC othuthukile ukuqinisekisa ukunemba okuphezulu nokushintshana okuhle, ukuhlola okwenziwa nge-CMM. Izinto zensimbi ye-ductile, insimbi empunga esezingeni eliphakeme nensimbi eshisiwe ingatholakala, ibhodlela linokuqina okuphezulu futhi lingathwala umthelela omkhulu wokucindezela. Singakwazi ukuklama nokukhiqiza usayizi ohlukile wamabhodlela ngemfuneko yakho, futhi sakha nebhokisi lemoto pallet ngokuya ngemidwebo nokucaciswa kobuchwepheshe kwamakhasimende.
Ukubumba amabhodlela ithuluzi elisetshenziswa kuma-foundries. Lapho umshini wokubumba usebenza, amaflaskhi okubumba abamba isihlabathi sakhe isakhiwo esithile. Ngemuva kokuthelwa kwensimbi enjengoncibilikisiwe esihlabathini esibunjiwe esasiphethwe ngamabhodlela okubumba, okokuncibilikisa kuzoqina futhi kwakheke ekusakazweni okudingayo. Amabhodlela okubumba ngokuvamile enziwe ngezinto zensimbi bese enza ngomshini ukuhlangabezana nezincazelo.
Imininingwane Yokuletha: kungakapheli izinsuku ezingama-30-90 ngemuva kokuthola idiphozi
1.Gxila kokuphonswa kosayizi omkhulu / okuphakathi, kanye nosayizi omncane.
2.Gray yensimbi / i-Ductile iron casting ngenqubo ye-Resin-Bonded sand sand.
1.Isampula noma Ukudweba ngamakhasimende
Isiphakamiso seTooling kanye nengxoxo
Idizayini ye-3.3D yamathuluzi
5.Rough izingxenye nomkhiqizi
7.Fitting & Qeda
Isilinganiso seTooling & Hlola
Ukuvunyelwa kwesampula ngamakhasimende
Okujwayelekile I-ISO9001, i-GB, i-BV
Izinto Insimbi empunga 200, 250, 300, 350, 400
Insimbi ye-Ductile 400, 500, 700
Usayizi nokuklama Ngokuya ngemidwebo nezidingo zamakhasimende
Isisindo ububanzi Ubukhulu besiqeshana esisodwa bungu-80 MT
I-Maching Umshini wokugaya we-CNC, isikhungo somshini, i-Vertical lathe,
Umshini we-Digital floor oyisicefe nowokugaya, umshini we-Drill,
Ukuhlola Isihlaziyi sokufunda ngqo / i-German SPECTRO,
I-digital digital & sulphur analyzer ezenzakalelayo,
Umshini wokuhlola umthelela wokushisa okuphansi,
Umshini wokuhlola we-60MT Hydraulic universal, njll.
Ukwelashwa komhlaba Ukwelashwa ngokushisa, ukuhleleka, ukupholisha, ukudweba, njll.
Ukupakisha Njengezidingo zamakhasimende
i-cast iron, i-grey iron casting, i-ductile iron casting, ikhwalithi ephezulu kanye nensimbi eqondile yokusakaza yamathuluzi omshini, imikhiqizo emikhulu naphakathi nendawo yokusakaza ngqo kusuka efektri yethu
Flaskkuyinto ebalulekile ubuchwepheshe imishini othomathikhi noma semi-othomathikhi udini umugqa. Imishini ngomshini we-CNC othuthukile ukuqinisekisa ukunemba okuphezulu nokushintshana okuhle, ukuhlola okwenziwa nge-CMM. Izinto zensimbi ye-ductile, insimbi empunga esezingeni eliphakeme nensimbi eshisiwe ingatholakala, ibhodlela linokuqina okuphezulu futhi lingathwala umthelela omkhulu wokucindezela. Singakwazi ukuklama nokukhiqiza usayizi ohlukile wamabhodlela ngemfuneko yakho, futhi sakha nebhokisi lemoto pallet ngokuya ngemidwebo nokucaciswa kobuchwepheshe kwamakhasimende.
I-Weifang Sofiq Machinery Co., Ltd.yibhizinisi lesayensi nobuchwepheshe, eliseWeifang City Hanting esifundeni esiseduze neBehai Road, ezokuthutha ezilula. Umshini we-H anshuo usebenza kwimishini yokuqamba imishini yokuphakela abahlinzeki, ukuklama nokwenziwa kwale mikhiqizo emikhulu elandelayo: ibhodlela kanye nemoto ye-pallet yomugqa wokubumba, umugqa wokufaka othomathikhi we-static othomathikhi, uchungechunge oluzenzekelayo oluzenzekelayo lwelayini lomugqa we-flask, ama-flasks okuzenzakalelayo aqondile ulayini wokubumba, umshini wokuthela othomathikhi kanye nomshini osizayo womugqa wokubumba, umugqa wokubumba ngomshini, umugqa wokubumba ngomshini, i-BLT, uchungechunge lwe-scale conveyor kanye ne-plate conveyor ehlukahlukene engajwayelekile.
Ifektri yethu ihlome kahle futhi inamandla obuchwepheshe obusezingeni eliphezulu, izindlela zokubona eduze. Kwaphela amashumi eminyaka, siqoqa ingcebo yesipiliyoni sokukhiqiza ngomthamo ophezulu kanye nezinga lokukhiqiza. Ngomkhiqizo wobungcweti nokwakheka kokuklama, sinikeza izixazululo ezenziwe zenzelwe ikhasimende.
Le nkampani ibilokhu igcina amanani ayisisekelo okuthi "idale inani lamakhasimende", futhi inamathele esimisweni sokwethembeka nokusizakala ngokuhlanganyela ukuthola isimo sokuwina. Ngokuqamba okuqhubekayo, sizibophezele ekunikezeni imikhiqizo yethu ephelele kanye nensizakalo enhle kumakhasimende.
Ngomkhiqizo wobungcweti nokwakheka kokuklama, sinikeza izixazululo ezenziwe zenzelwe ikhasimende. Ngokuya ngesikhungo esithuthukile, ubuchwepheshe bokucubungula okungcono, ukulawula okuqinile kokucubungula nokuhlolwa kwekhwalithi, sihlala sikholelwa ekucabangeni kwekhwalithi kuqala nokwaneliseka kwamakhasimende.
Imibuzo Evame Ukubuzwa:
1. Ungumkhiqizi noma inkampani yokuhweba?
Sisebenza ekubunjweni kwemishini yokukhiqiza umphakeli ochwepheshe
2. Ngingazithola kanjani ezinye izampuli?
Uma udinga, siyajabula ukukunikeza amasampula mahhala, kepha amaklayenti amasha kulindeleke ukuthi akhokhe izindleko zeposi, futhi imali izokhishwa enkokhelweni ye-oda elisemthethweni.
3.Ungakwazi ukwenza ukusakaza ngokuya ngomdwebo wethu?
Yebo, singenza ekubunjweni ngokusho umdwebo wakho, 2D umdwebo, noma imodeli 3D cad. Uma imodeli ye-3D cad inganikezwa, ukuthuthukiswa kwamathuluzi kungasebenza kahle. Kepha ngaphandle kwe-3D, ngokususelwa kumdwebo we-2D sisengakwazi ukwenza amasampuli agunyazwe kahle.
4. Ungakwenza ukusakaza ngokususelwa kumasampula ethu?
Yebo, singenza isilinganiso ngokususelwa kumasampula akho ukwenza imidwebo yokwenza amathuluzi.
5. Iyini idivayisi yakho yokulawula ikhwalithi endlini?
Sine-spectrometer endlini yokuqapha impahla yamakhemikhali, umshini wokuhlola ukuqina ukulawula impahla yomshini kanye ne-UT Sonic njengendlela yokubheka i-NDT yokulawula ukutholwa kokukhipha ngaphansi kobuso bokusakaza.
Langaphambilini Static Pressure okuzenzakalelayo Molding Machine
Olandelayo: Molding ibhokisi othomathikhi udini umugqa
Static ingcindezi Molding Line
Flask Ukubumba, Molding Ekubunjweni Flask, I-Sandbox, Flask Isikhunta Machine, Semi-okuzenzakalelayo Molding Machine, Punch Out Umshini,